Daawo Ninkeyga wuxuu iiga galmoodaa meel ay gaalada jeceshahay oo Diinteena diiday | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Daawo Ninkeyga wuxuu iiga galmoodaa meel ay gaalada jeceshahay oo Diinteena diiday
Daawo Ninkeyga wuxuu iiga galmoodaa meel ay gaalada jeceshahay oo Diinteena diiday
Bulsha:- Waxaa fariin qoraal ah naga soo gaadhay marwo soomaaliyeed. Fariinteeda ayaa sidaan u qornayd:
“Asc walaalayaal waan idin salamaay warka24.com, salaan kadib magacaygu waa hooyo Soomaaliyeeed oo ku nool mid ka mid ah wadamada Yurub. waxaan ahay xaas 3 caruur ah haysata, dhowrkii sano ee dambeeyay waxaa i haystay mushkilo aad u weyn.
Ninka iqaba waxa uu caadaystay markaan isku tagayno ijmaaca inuu aado gadaal aniga arintaas waan ka karaahiyaystay. marar badan waan ka diiday laakiin wuu igu qasbaa.
Waagi hore marmar dhif ah ayay ahayd laakiin waayadaan dambe wuxuu ka dhigay mid joogta waan u muujiyay inaan necbahay arinkaas oo aan aad u dhibsado laakiin ma uu kala jecla. ”
HALKAAN KA DAAWO JWAABTA
“Waan kala hadlay marar badan sidoo kale waxaan weydiiyay sababta uu halkaas u aadayo wuxuu iigu jawaabaa jawaab aad u xun oo qof weyn aan ku haboonayn inuu ku hadlo wuxuu iyaraahdaa waxaan jeclahay meel ciriiri ah!. Waxaan ku fakaray xiliyada qaar inaan iska furo laakiin caruurtayda dartood yaan hadana kula joogaa. Waa igu dhib walaalayaal uma dul qaadan karo maxaan sameeyaa ila taliya fadlan. mahadsanidin.”
Wacalaykum wasalaam waraxmatullahi wabarakatuh. Walaal aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay kalsoonida iyo su’ashaada aad dooratay Warka24.com inay kaaga jawaabto.
walaalo qofkasta oo muslim ah oo wax bartay daah kama saarna inay mamnuuc tahay in dumarka dabada ama gadaal looga galmoodo.
Diinteena wanaagsan haday shey naga reebto, xikmad baa halkaas ku jirta. dhibaatooyinkiisa ayaa badan. waxaan shaki ku jirin galmada gadaal in laga qaado cuduro badan. Haduu ninkaagu kaa dalbado wax xaaraan ah haku adeecin ka diid marnaba haka ogolaan. U nasteexee walaal zowjkaaga oo xasuusi inay xaaraan tahay arintaas loona baahanyahay inuu ka fogaado kala hadal arintaan waqtiyada aad wada sheekaysanaysaa ee aad kaligiin tihiin. Warka24.com ayaa ku rajeynaysa in Allaha ku barakeeyo qoyskaaga soona hanuuniyo ninkaaga.